I-China S216 ephezulu kunye neLezantsi yeeleyibheli yokuvelisa kunye neFektri | I-S-conning
Umatshini wokuPhawula okrelekrele
Umatshini wokuPhawula ngokuTya kunye noTywala
Iimveliso zombane zeleyibheli
Imichiza yemihla ngemihla kunye nelebheli yokuthambisa
Iindibano zeSirinji ezizalisiweyo kunye nelebheli
Warp-ngeenxa zonke Labeler
Inkqubo yeTreyi yokufaka okrelekrele
okrelekrele yahlula System Itreyi
ukupakisha umgca wemveliso
SLA-310 Round Bottle nkqo ...
Full-oluzenzekelayo okrelekrele ...
Umatshini wokuPhawula iPlane
S307 ngesantya esiphezulu igutyana ilebheli ...
S921 ngesantya esiphezulu ityhubhu ethambileyo l ...
I-S216 ephezulu kunye nelebheli esezantsi
Umatshini wokuPhawula oPhezulu oPhezulu nangaseZantsi ngumatshini wokulebhelisha ozenzekelayo ngaphandle kweebhokisi
I-S216 ephezulu kunye neZantsi yoMatshini wokuPhawula oPhezulu
I-S216 iilebheli eyilelwe ukuba yenziwe ngokuzenzekelayo ngaphandle kwebhokisi ephezulu nasezantsi kuluhlu lwezinto zokuthambisa zemihla ngemihla, i-elektroniki, amayeza, ukutya kunye nezinye iimveliso zeshishini.
Uluhlu olubanzi lohlengahlengiso loMatshini wokuPhawula iBhotile ngento eyahlukileyo yesayizi. Indlela eyahlukileyo yeleyibheli yokubamba indlela yokuphawula, yenza ngcono ukubekwa kwelebheli ephezulu kunye nezantsi.
Iilebheli zilawulwa sisinxibelelanisi esinejubane eliphezulu kunxibelelwano (HMI) ukuqinisekisa ukuba ukuhanjiswa kwedatha kuzinzile kwaye kuchanekile. Ivumela umzobo wolawulo ukuba ubhekise phambili kwaye uzinze, oya kuqinisekisa ukuphuma komatshini ngokuchanekileyo.
* Uyilo olusengqiqweni nolubhetyebhetye olulungele iimveliso ezahlukeneyo zokulebhelisha.
* Ngaba inqaku lokubhabha lenqwelomoya liyinto eyahlukileyo, landisa uluhlu lwesicelo.
* Ngokudibanisa abafaki zelebheli ezongezelelweyo banokuyibona ileyibheli yokunamathela kabini kwaye baphindaphinde ukulebhelisha, Sinokongeza iindawo ezahlukeneyo zokufumana umsebenzi we-Intanethi kunye nokwala ngokweemfuno zakho.
* Ibhanti yokuqinisa ukubambelela .ukuqinisekisa ukubeka iileyibhile ngokuchanekileyo ngakumbi.
* Inkqubo yokuphawula ilawulwa yi-Siemens inkqubo yolawulo lwe-PLC, ukuqinisekisa ukusebenza okukhawulezayo nokuzinzileyo.
Ukuhanjiswa kwelebheli kuqhutywa yimoto ye-servo motor (Yaskawa / Schneider / Honeywell) yokuqinisekisa ukuchaneka kwelebheli, ukusebenza ngokukuko kunye nesantya ngelixa iphantsi ekusebenziseni amandla. (Kwimfuno zesantya esiphezulu, i-servo motor inokukhethwa)
* Sebenzisa isiphelo esiphezulu sefayibha yokukhanya kunye ne-infrared sensors (Keyence / Leon / Dalsa / Sick / Leuze) ukufumanisa ngokuchanekileyo kunye nokwenza umqondiso ngaphandle kokuphazamiseka.
* Inkqubo eguqukayo yenjini ye-servo inikezela ngozinzo oluphezulu kunye nokuchaneka.
* Isebenza kuzo zonke iintlobo zebhokisi okanye iibhotile ezinobubanzi obungama-30-150mm.
* Ukwamkelwa kwecandelo eliphezulu ukusuka eJamani, eFrance, eJapan, e-USA.
* Uyilo olubuthathaka kunye nolwakhiwo lwenzululwazi.
* S-conning uyilo elilodwa lomenzi, ezibalaseleyo nokupakisha mveliso.
* Iminyaka eli-12 yamava, ingcali yokulungisa ingxaki.
* Inkonzo enzulu emva kokuthengisa.
* Isantya sokulebhelisha sihambelana ngokuzenzekelayo nesantya sokuhambisa ukuqinisekisa iileyibhile esemgangathweni.
* Imemori engama-50 yomsebenzi ukuze ukhumbule ngokulula.
* Precision servo motor drive kwiintloko ilebhile.
* Ukuqinisekisa iimfuno zokusingqongileyo ze-GMP.
* Isikrini sokuchukumisa se-HMI: Ikhusi lolawulo lokuchukumisa lomntu.
I-S216 ephezulu kunye neLazile yeLebhu yeZinto eziManyeneyo ixhotyiswe ngobuchule bokuhlengahlengisa okulungeleyo kwimisebenzi eyahlukeneyo yemveliso, enjengeendawo zokulebhelisha kunye neemfuno zeparameter kwimveliso. Oku kuqinisekisa ukuveliswa kwemveliso yakho ngokuzinzileyo kunye nokubonakala kweelebheli okufanelekileyo.
Ubukhulu (L) 2180 x (W) 810x (H) 1600mm
Ubungakanani besikhongozeli I-W50-340mm; H 10-280mm
Isantya ≤250pc / m
Ukuchaneka kwelebheli ± 1.0mm
Egqithileyo Ibhokisi / ibhokisi ephezulu kunye noMatshini oMiselweyo wokuPhawula umphezulu
Okulandelayo: Icala eliphindwe kabini leFlat yokujikeleza iBhotile yokuMakisha
Phezulu kunye nasezantsi kweLebheli yomfaki sicelo
Phezulu kunye nasezantsi kwelebheli
Umatshini wokuPhawula oPhezulu nangasezantsi
Inkqubo yokuPhawula ephezulu kunye nasezantsi
Ilebheli ephezulu ephezulu
I-SLA-310 Umatshini wokuPhawula iBhotile ojikelezayo ojikelezayo
Ibhokisi / ibhokisi ephezulu kunye nePhezulu yokuPhawula i-Ma ...
S823 kabini icala ileyibheli
S921 Isantya esiphezulu sebhubhu ethambileyo
Ibhotile ejikelezileyo esecaleni eselebeni yesincamathelisi
Kellida Industrial Park, No. 18, Sui da Street, Kaiyuan Avenue, Isithili Huangpu, Guangzhou, China
Silandele uhlaziyo oluthe kratya
Ilungelo lokushicilela (c) S-Conning Technology Group, limited. Umgca wentengiso: 008613632224946 (urhwebo lwangaphandle) Imveliso eshushu - Imephu yendawo
Umatshini wokuPhawula iBhotile yoRhwebo, Umshicileli weLayibhile yeeBhotile zeJar, Indibano yesirinji kunye neNkqubo yokuPhawula, Umatshini wokufaka iilebheli kwiibhokisi, Umatshini wokuTywina wePlastiki, Phezulu kunye nasezantsi kwelebheli,